ကိုစိုးနိုင်၏ ဘလော့: ထူးဆန်းထွေလာ လူ့ခန္ဓာ
ဘဝမှာ လွတ်လပ်ခြင်း၊ ပျော်မွေ့ခြင်း၊ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်း နဲ့ ပြည့်စုံချင်ရင် ဘာကိုမှ သွားပြီး မငြိတွယ်နဲ့။ အားလုံးရဲ့ အနှောင်အဖွဲ့က လွတ်အောင်နေ။
ကျွန်တော် လေးစားသော ကျွန်တော့ဘဝ၏ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြ ပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ကျွန်တော် လေးစား၊ အားကျ ၊ ဂုဏ်ယူ ၊တန်ဖိုးထားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
(2) လူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအသန်မာဆုံးကြွက်သားကလျှာဖြစ်ပြီးအမာကျောဆုံး အရိုးကတော့ မေးရိုးပါ
(3) လူတစ်ယောက်ရဲ့ခြေဖ၀ါးဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှအရိုးပေါင်းရဲ့လေးပုံတစ်ပုံမျှရှိပြီး အရိုးပေါင်း ၅၂ ချောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
(4) ခြေဖ၀ါးမှာ ချွေးဂလင်းပေါင်း 500,000 ခန့်ရှိပြီးအဲဒီချွေးဂလင်းတွေ က တစ်နေ့ကိုချွေး (1)ပိုင့် မက ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
(5) သင့်အစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အစာခြေရည်(အက်ဆစ်)ဟာသင်တုန်းဓားကိုတောင် ချေဖျက်နိုင်တဲ့ အထိ ပြင်းအားရှိ ပါတယ်။ အဲဒီအက်ဆစ်ရည်ဟာ အစာအိမ်ကိုတော့ဘာကြောင့်မထိခိုက်စေလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းက - အစာအိမ်နံရံဟာသုံးရက် ဒါမှမဟုတ် လေးရက်တစ်ကြိမ်လောက်ဆဲလ်အ သစ်တွေ နဲ့ အလိုလိုအစားထိုးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(6) နှာချေလိုက်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့အမှုန်အစက်တွေဟာ တစ်နာရီကို 100 mph နှုန်းအထိရှိပြီး ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာတော့ 60 mph နှုန်း အထိလျှင်မြန်ပါတယ်။
(18) “သွား” ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာ ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး မပြုလုပ်နိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသော အစိတ်အပိုင်းပါ။
Posted by ကိုစိုးနိုင် at 4:16 AM
ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆန္ဒပြနေတာ မြန်မာပြည် လျှပ်စစ်မီး မြန်မြန် ပြည့်ဝ ပေါများပါစေ--
ကျွန်တော်တို့ ပရဟိတ အဖွဲ့
မြန်မာ့အရုဏ်သစ် ပရဟိတ အဖွဲ့
ကြုံရဆုံရ သူတို့ဘဝ (2)
အကြင်နာနှင်းဆီ၏ ကဗျာများ (53)
စိတ်ဝင်စား ဖတ်ချင်စရာ ဘလော့များ
လိုချင်နေသမျှ ဆင်းရဲမယ် ဘာမှမလိုချင်တဲ့တစ်နေ့ ချမ်းသာခြင်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်။
မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ (သုမောင်)
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်သော ဘဝများ ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။။
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။. Travel theme. Powered by Blogger.